Suugaanta xayawaanka ee imtixaanka tifaftirka. Waxaan kugula talineynaa sida ugu fiican eeygaaga
Start farmashiye salaaxid Hundegeschirr
1 Xayawaanka eeyaha ah ee loogu talagalay rakaabka fudud
2 Daboolka Hundegeschirr
3 Waa maxay faa'iidooyinka dareenka suunka?
4 Noocyada kala duwan ee looxaanta eyga
5 Cuntada noorwiijiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday mid caan ah.
6 Qalabkee ayaa ku habboon soo saarista dunta lagu hagayo?
7 Wixii eey ayaa ah suun ku haboon?
8 Sidee loo go'aamiyaa cabbirka munaasibka ah ee suunka?
9 Ma waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho dharka xayawaanka?
10 Sidee baad u nadiifin kartaa suunka xayawaanka?
11 Maxay tahay inaad ka fiirsatid marka aad iibsanayso daloolka haragga
12 Halkee baad ka iibsan kartaa suunka saxda ah ee saxda ah?
Ein Hundegeschirr si tartiib ah u ordaya qadadka
Meelo badan, waxaa jira waajibaad dhar ah eeyaha. Laakiin sidoo kale, si uu si ammaan ah u hoggaamiyo eyga afar-lugood leh ee maraya waddooyinka marmarka ah ee waddooyinka, eeyga ayaa lagu xiraa dhogorta. Xiriirka u dhexeeya eyga iyo eyga ayaa lagu daray qoorta ama a xambaarka, Doorashada qaababka muuqaalka ku habboon waa weyn. Waxa aad ka fikireyso ka hor intaadan gadan, waxaad ka heli doontaa halkan.
Mar labaad iyo mar kale, milkiilaha eey ayaa la kulmay su'aasha: Waa maxay wanaajinta, dabka ama dunta? Labada noocba waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Wixii qoorta xayawaanka iyada oo aan lahayn dadaal badan. Sidaa daraadeed, jilbuhu wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay milkiilayaasha eeyaha ah ama dadka leh curyaanimada si ay u hagaan xoolaha afar lugood leh marka loo eego suumanka. Eeyku sidoo kale ma aha mid cidhiidhi ah dhaqdhaqaaqiisa.
Waad ku wadaysaa a xambaarka milkiiluhu wuxuu u baahan yahay xoogaa yar oo dheeraad ah haddii eeygu uusan ahayn leinenführig oo caadeystey inuu jiido khadka.
Waa maxay faa'iidooyinka? Hundegeschirr?
- Marka eygu si culus ugu riixo xakamaynta, xoogagga xooggan ayaa la sii daayaa, kuwaas oo lagu sii gudbiyo dusha sare ee suunka ama xarkaha. Markaad xidhato a eeyaha macrifada ciidankan ayaa ku faafay dhowr meelood oo eey ah, waxayna ku xiran tahay nooca suxuunta, meel weyn oo ku taal qoorta, dhabarka iyo laabta. Sidaa darteed, khatarta dhaawac ama jahwareer ka soo horjeeda aagga isku dhafan markaad xiran tahay qoryaha ayaa laga hortagayaa. Maadaama ay jiraan dhiig badan oo dhiig ah iyo qaybta lafdhabarta oo ay ku jiraan nabarada dareenka ee aagga qoorta eeyga, daboolka khaldan ee qaldan ayaa si sahlan u horseedi kara dhaawacyada aan la goyn karin ee qalabka dhaqdhaqaaqa marka eeygu la gooyey.
- Mid Hundegeschirr waa mid amaan ah haddii ay dhacdo xaalad fiican, xaqiiqda ah ee aan qaan-sheegan karin hubaal. Waxaa jira marwalba afar xayawaan leh, kuwaas oo ka takhalusi kara qoryaha oo kaliya hal dhaqdhaqaaq madax. Khatarta ah in eey xitaa bilaash ka hor gaadhi ka hor, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn.
Noocyada kala duwan ee looxaanta eyga
Waxaa jira noocyo dhowr ah oo ku habboon xaaladaha kala duwan:
Das xambaarka ayaa hadda ah qaabka ugu badan ee la iibiyay. Iyada oo suumankaasu suunka ka socdo dhabarka. Laba xirmooyin guud oo la isku hagaajin karo oo furan ayaa ku yaal agagaarka qoorta iyo hareeraha xabadka. Badanaa labadoodu waxay ku xiran yihiin caloosha. Maadaama baqshimadu ay la mid tahay "H" marka la furo, waxaa sidoo kale loo yaqaan "H-harness".
Maadaama baqshimadani ay tahay mid la awoodi karo, waxay si gaar ah ugu habboon tahay eeyaha sii kordhaya. Faa'iidada kale waa in dadka firfircoon jir ahaan eeyaha ay la xambaarka weheliyaan si fiican u yimaado, maxaa yeelay, weelka ku habboon ee ay hubisaa in eey ka wanaagsan iyo caafimaad-saaxiibtinimo iyo isaga kuu ogolaanaysaa halka baaxadda wali ku filan. Eeyku kuma dhicin dhaqdhaqaaqiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in suxuunta yihiin kuwo si fiican loo habeeyey in on a la maro dib u gaaban oo tusaale ah ee suunka qoorta ku qancin kartaa.
Das "Y-xambaarka" waa horumarinta dheeraadka ah ee suumanka. Ma uusan isticmaalin gadaashiisa. Sidaa darteed waxay ka kooban tahay suunka qoorta iyo suunka xabadka, taas oo mararka qaarkood ay sidoo kale ku xiran tahay caloosha. Halkii laga heli lahaa gadaashiisa, indhaha oo kaliya in lagu xiro xadhigga ayaa kor ku yaal.
Xayawaankani waa sahlan tahay in la gooyo, maadaama ay guud ahaan kaliya laga saaro madaxa oo waa in lagu xiraa labada dhinac ee laabta.
Eeyku wuxuu xitaa xoriyad badan u leeyahay dhaqdhaqaaqa suuban, dhirbaaxo ku xiran lugaha lugaha hore ma'aha suurtogalnimada codsi sax ah. Si kastaba ha ahaatee, waa in qaabkani uu si fiican u habboon yahay. Midigta xadhig waa eey Eeygu markaa si ammaan ah ayaa loo xakameyn karaa.
Das Norwegergeschirr ayaa noqday mid sii kordhaya sannadihii ugu dambeeyay.
Suunka feerka wuxuu si buuxda u xiraa godka eyga ka dambeeya lugaha hore. Suunka kale wuxuu keenaa qoorta labada dhinacba. Dareemaha waxaa lagu dhejin karaa iyadoo loo marayo ileyska dhabarka.
Faa'iidada weyn ee naqshadahan ayaa ah in cadaadiska uu ku faafo gebi ahaanba inta lagu jiro jiidista iyo gobolka qoorta ah ee la gooyey sidaas daraadeed ma walaacsanayn. Maaddaama ay tahay naqshadeeda gaarka ah, duufaanta Norway waxay leedahay meelo yar oo keliya, iyada oo la xiriirta jirka ee eyga, kaas oo siinaya xoriyadda buuxda ee dhaqdhaqaaqa. Dhanka kale, eeyadu sidoo kale waxay iska xoroobi karaan suunkaas adigoo si fudud u leexanaya marka hogaanka la sii wado. Sidaa daraadeed, eeyaha aadka u baqaya ama xoriyada jacaylka jecel waa in aan loo qaadin koobab norwiijiga.
Das suxuunta koore ayaa sidoo kale noqda mid caan ah oo caan ku ah Jarmalka iyada oo loo marayo noocyada "Julius K9". Mabda 'ahaan, waxay u dhistay sida dharka Norway, laakiin waxay leeyihiin gadaal ballaaran, taas oo xusuusinaysa kicinta. Sidoo kale moodooyinkaas cadaadiska ayaa si fiican loo qaybiyaa iyada oo aan la xakameynin dhaqdhaqaaqa eyga. Sababtoo ah tan Hundegeschirr laakiin aad u ballaaran, waxay ku habboon tahay eeyaha waaweyn. Inkasta oo ay sidoo kale loo soo bandhigo jajab yar, waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aad u ballaaran oo aan fiicneyn. Khasaare dheeraad ah waa in xagaaga xagaaga kuleylku wuxuu ku ururi karaa qolofka. Eeyaha dhererka dheer leh ayaa markaa si dhakhso ah dhidid, kaas oo u kobcin kara kulaylka.
Das Qalabaynta maqaarka marmar dhif ah ayaa lagu arkay waddooyinka Jarmalka. Noocani wuxuu ka kooban yahay labo wareeg oo lugaha hore, kaas oo la jiido sida qaansoole oo la xiro dhabarka. Sidaas daraadeed waa adag tahay cadaadiska cadaadisku sidoo kale waa mid aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in uu yahay mid taam ah, sababtoo ah waxay keeni kartaa xayiraad ka hoosaysa kilkilooyinka. Sidaa daraadeed waa in la jaangooyo moodooyinka laga soocay Nasiib daro, saxankani maahan mid gabi ahaanba dillaacsan oo sidaas darteed wuxuu ku habboon yahay oo keliya deganaanta ama waayeelka. Noocyada waaweyn ayaa ah kuwa aan ku haboonayn moodooyinkaas, maadaama ay sidoo kale si dhakhso ah looga saaro kuwan oo isticmaalaysa eeyaha bilaash.
Qalabkee ayaa ku habboon soo saarida a suunka Lead?
Qalabku waa inuu noqdaa mid iftiin ah, laakiin wali waa mid deggan oo adkaysi u ah cimilada iyo qoyaanka. Si kastaba ha noqotee, waa inay noqoto mid jilicsan oo jilicsan si loo yareeyo khatarta calaamadaha xanuunka leh. Maaddada neefta waa faa'iido, sidaas darteed eeygu ma dhidid xitaa maalmaha kulul. Qoyaanka ka baxaya qashin-qubka waxay u horseedi kartaa cuncun maqaarka ah, barar oo xitaa laga yaabo in ay daweeyaan dhakhaatiirta xoolaha.
Sida qalab ku habboon a xambaarka eeyaha, alaabta OEKO-TEX oo tayo sare leh dusha biyaha, daaweynta nacasta u adkaysata ama dharka wax lagu kariyo iyo sidoo kale maqaarka ayaa iyagana xaqiijiyay naftooda. Inkasta oo dharka cusub ama naylaha cusubi ay aad u sahlan tahay in la nadiifiyo, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa mashiinka dharka marka la wasakheeyey, waa lagama maarmaan Hundegeschirr oo ka samaysan maqaar leh daryeel gaar ah, si ay u noqdaan kuwo isdifaacaya oo dheellitiran.
Maaddaama duufaanta ay tahay inay u dhowdahay eeyga, waa inaad doorbido suumanka dillaacsan. Natiijadu, natiijo la'aan iyo marxalado marmar ah ayaa laga hortagi karaa. Dhammaan noocyada kala duwan oo isticmaalaysa eeyaha waxay leeyihiin qaabab la duubay.
Wixii eyda ey tahay a Hundegeschirr waxtar u leh?
Mabda 'ahaan, eey kasta waxay yeelan kartaa mid xambaarka qaado. Si kastaba ha ahaatee, waxay si gaar ah ugu habboon tahay eeyaha walaacsan ama xasaasiga ah ama eyda afar-legged, kuwaas oo aan la jaanqaabin lakabka oo aan baranin in ay socdaan iyada oo aan si adag u jiidan dharka. Sababtoo ah xayawaanka noocan ah ayaa ilaaliya Hundegeschirr ka hor dhaawacyada. Xitaa eeyaha, kuwaas oo aad u xor ah-jecel yahay iyo mar walba dabaysha ka soo colaadda, waa iyaga xambaarka sida haddii la abuuray.
Sida loo go'aamiyo cabbirka ku habboon a eeyaha macrifada?
Sidaas awgeed maaha inay timaaddo ama xoqdo, a Hundegeschirr cabbirka ku habboon. Marka aad iibsaneysid waa lagama maarmaan in eey u qaadato si haboon. Haddii aysan suurtagal ahayn, waxaad xisaabin kartaa cabbirka ku habboon adoo isticmaalaya miiska soo saaraha. Iyadoo ku xiran qaabka waa inaad cabirto wareegga laabta ee eeyga isla markiiba ka dambeeya lugaha hore. Qiyaasta cajaladdu waa inaanay aheyn mid aad u dabacsan, laakiin aan aad u dhicin. Qiyaasaha kale ee muhiimka ah waxay noqon karaan wareegga qoorta iyo dhererka dhabarka.
Sababtoo ah dad badan xabadka oo isticmaalaysa haysashada suurtogalnimada isku dheelitirnaanta kala duwan, kuwani waa la bedeli karaa si sax ah. Kaliya xul aad u fiican Hundegeschirr wuxuu hubiyaa xoriyadda dhaqdhaqaaq ee lagama maarmaanka uuna u geysaneynin eeygaaga. a xambaarka, oo aan ku habbooneyn ama si sax ah u qalmin, lama aqbalo eeyga muddo dheer. Wuxuuna diidi doonaa in la sii daayo.
Waa inuu noqdaa afar lugood Hundegeschirr loo isticmaalo?
Dad badan, gaar ahaan eyda yar yar waa inay marka hore leeyihiin a xambaarka la caadeysto. Iyada oo ku xidhan mawduuca eeyga afar-lugood leh, is-waafajintaan si dhaqso ah ayaa loo qabsan karaa ama waa la kordhin karaa waqti dambe. Eyda badani waxay isku dayaan kuwa ugu horreeya, kuwa aan la aqoon Hundegeschirr si ay u leexiyaan ama u difaacaan naftooda horayba uga soo horjeeda abuurista. Halkan, milkiilayaasha iyo / ama muusikadu waa inay la shaqeeyaan dareen yar. Haddii suunka la daboolo, eygu markaa waa in lagu amro in la buunbuuniyo si looga fogaado dareenka xidhashada. Tan waxaa lagu sameyn karaa daaweyn ama ciyaaro ballaaran.
Haddii eygu xitaa helin tan Hundegeschirr sidaas darteed waxaa lagu sameyn karaa sabir badan feed in la isku dayay, in afarta lugoodba uu madaxiisa ku riixo suunka qoorta, sababtoo ah wuxuu jeclaan lahaa in lagu daaweeyo. U ogolow eyga inuu daawada ka qaato ka dibna u ogolaado inuu ka baxo. Ha xoojin xirashada iyo xidhashada mid Hundegeschirr, ka hor intaan eyga diyaar u ahayn, maaddaama aad kor u qaadeyso iska caabinta oo aad isticmaali karto mar dambe oo aan macquul aheyn. Eeyooyinka, oo diiddan inay diidaan xakamaynta, waa inaysan marnaba u soo galin xakamaynta kaddib marka koowaad. Tani waxay kordhin kartaa caabbinta. Ku rid xambaarka kaliya muddo gaaban oo ka mid ah derbiyada afar gees ah ilaa eygu u isticmaalay. Kadibna markaa way socotaa socodka.
Sidee ayaad u heli kartaa mid Hundegeschirr Nadiifi?
Badankooduna waa nadiif ah. Qalabka cusubi waa mid adag oo ku haboon mashiinka dharka. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka qalajiyaha waa in laga saaraa. Kaliya xayawaanada waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Ma ku jiraan mashiinka dharka lagu dhaqdo waana in lagu nadiifiyaa maro qoyan. Ka dib, daaweynta leh wakiil daryeel oo gaar ah ayaa lagula talinayaa. Daryeelkaas waa in sidoo kale lagu sameeyaa wakhtiyo joogto ah iyadoo aan la nadiifin.
Maxaad ka iibsan kartaa a eeyaha macrifada note
Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ah oo lagu xisaabtami karo marka la samaynayo go'aanka iibka. Dhinaca kale, mawduucyada iyo dheecaanka eeygu waa muhiim sababtoo ah habka saxda ah waa in la soo xushaa kadib.
Dhinaca kale, xajmiga wuxuu sidoo kale ka ciyaaraa door muhiim ah. Waxaa faa'iido leh haddii qaabka la doorto si gooni ah loogu qaabeyn karo qiyaaso kala duwan. Sidaas awgeed waxay ku kori kartaa eyda yar yar waxayna ku habboon tahay, haddii afarta lugoodba hal mar ama yareeyo.
Meelaha wax lagu xiro ee meelaha la xiriira waa had iyo jeer wanaagsan, midaasina waxay kor u qaadaysaa raaxada iyo afar - lugood Hundegeschirr halkii la aqbali lahaa.
Ka iibso kali-fuubyada oo tayo sare leh. Qalabka la isticmaalay waa in uu lahaadaa heer go'an oo sidoo kale waa in uu leeyahay saameyn tayo leh oo ku saabsan shaqadooda. Dhagaxyada waa in la nadiifiyaa, taas oo kor u qaadaysa awoodda ilmada iyo mudada dheer ee mid Hundegeschirr.
Halkee baad ka heli kartaa midda saxda ah Hundegeschirr Iibsashada?
Ein xambaarka eeyga aad ka iibsan kartid tafaariiqda ama internetka. Labada noocba waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda. Inta aad ku jirto goobta ganacsiga midkood Hundegeschirr tayada iyo wax qabadkooda, iyo sidoo kale sida saxda ah, waxaad heli doontaa xulasho aad u ballaaran oo soo saarayaasha kala duwan iyo alaabooyinka internetka ah. Si kastaba ha ahaatee, ha ku tiirsanaan faahfaahinta ganacsatada iyo sawirada ay geliyaan internetka, laakiin raadi natiijooyinka tijaabada ama dib u eegista macaamiisha ee iibsadaha. Sidaa daraadeed u fududee si aad u hesho fiicnaanshaha xun oo isticmaalaysa eeyaha inaad doorato. Faa'iidada kale ee iibsashada internetka waa wax kasta oo qiimo dhimis si ay doorasho ka weyn oo ay celinta coupon iyo qiimo dhimis mahad filayo. Markaa waxaad heli kartaa mid wanaagsan Hundegeschirr sidoo kale qiimo cadaalad ah.
Doonta Xarigga Dheeraynta La-habeyn karo ee Xarigga Ka-hortagga Jajabka Cadceeda Neefta Neefta leh ee Neefta leh
AR CUDURKA DHEXE EE DHAQANKA AR --- Cabbiraadda feerka: 70-80cm. Fadlan dooro cabirka ku saleysan cabirka eeygaaga adoo cabiraya qeybta ugu ballaaran ee xabadka eygaaga intaadan iibsan (dooro cabirka weyn inta udhaxeysa cabbir una dhaaf 2cm bilaash). Noocyada lagu taliyay: Dhex dhexaad eeyaha weyn, Hilibleyda Dahabka ah, Huskies, Labrador, Alaska, Adhiigyada Jarmalka, Akita, iwm. Tus eyladaada cilado qurux badan!
Fududeyn in la ISTICMAALO---- Cuntooyinkeenna way fududahay in la xidho oo lala baxo xawaaraha dhaqsaha badan. Xarig is-hagaajinta ayaa leh 4 xarig oo isku-hagaajin fudud oo jidhka ah. Xarkaha qoorta iyo xarkaha feeraha ayaa u oggolaanaya inay ku habboonaan karaan eeygaaga xorriyad dhaqdhaqaaqa. Qabso gacanta ugu sarreysa xakameyn dheeri ah. Kaamil ah socod maalmeedka, orodka, orodka, orodka, tababarka, madadaalada banaanka iyo waxyaabo kaloo badan.
AF SAFE AND GENTLE】 --- Qalabka eyga ee raaxada leh ee laga sameeyo nafaqadii ugu fiicneyd ee Oxford waayo-aragnimo eey wanaagsan. Xarkaha ka tarjumaya suumankaani waxay xaqiijinayaan badbaadada eeygaaga markii aad socod lugaynayso habeenka. Gacanta xasilloon ee dhabarka, waxaad si fiican u xakameyn kartaa una taageeri kartaa eeygaaga.
R 100% DIINTA BILAASH EE QARANKA---- Waxaa naga go'an inaan macaamiishayada siino alaab tayo sare leh iyo khibrad ganacsi oo fiican. Haddii aad la kulanto dhibaato ama aadan ku qanacsanayn sinaba, waxaad noo soo dirtaa emayl waxaanan ku siin doonnaa xalka ugu wanaagsan. Dhibaatooyinka oo dhan waxaa lagu xallin doonaa 24 saac gudahood.
Julius K9, 16IDC-R 0, IDC Powerharness, oo isticmaalaysa eey, Size: 0, rotAnzeige
Xabad: 58-76 cm Culeys: 14 - 25 kg
Xiddiga cirifka leh ee cufan iyo qurxinta jilicsan
Suurtagalnimada dhinacyada iyo fiilooyinka iftiinka
Calaamadaha 'fosphorescent' iyo sheybaarka velcro ee isweydaarsan kara
Alaabooyin dheeri ah fadlan booqo websaydhka 'Amazon Storefront'!
Julius-K9, 162P2, K9 awoodda korontada, cabirka: 2, tusaha madow
Xiiso: 71-96 cm, Culeys: 28-40 kg
Suurtagalnimada suurto galka dhinaca jilayaasha
HINTER Racing Xaraashka Noorwiijiga, suumanka isboortiga eeyaha, nuuradda, xayawaanka dhogorta, XL, brown / cognac tilmaanta
Xarkaha noorwiijiga oo leh shey nayl tayo sare leh iyo xargaha ka turjumaya eeyaha
Ku habboon orodka iyo la wadida eeyga
Gaar ahaan raaxo leh oo jilicsan dhogorta mahadnaq u noqoshada dhogorta laabta leh ee laabta, qoorta iyo garbaha
Iyada oo gogol shaqsi isku habeyn karo loogu talagalay raaxada ugu fiican
Cabbirka XL: caloosha 72 - 90 cm | Width 3,8 cm
Xayawaanka eyda yar ee 'Petacc Dog Harness Dhexdhexaadka Dhexdhexaad ah La-isku-hagaajin karo eeyaga Dog Xarigga Ma Jiro, Xariga eeyaha ee leh Xariijinta D-Ring Positive Posicator D-Ring
【Xullo cabirka ugu wanaagsan ee eyga】 - Cabbirka feerka: 70-95 cm / 27,6-37,4 inji, wareega qoorta: 43-63 cm / 16,9-24,8 inji. Noocyada lagu taliyay: eeyaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Xusuusin: Fadlan cabiro qaybta ugu ballaadhan ee laabtaada iyo qoortaada ka hor intaadan dalbanin si loo go'aamiyo tirada ugu fiican eeygaaga. .)
Way fududahay in la xidho oo la waafajiyo】 - Nashqulka tuubbada ayaa si dhakhso leh loo xidhi karaa oo loo furi karaa, way fududahay in la xidho oo laga baxo suunka. Xarkaha si buuxda u habeyn kara oo laabta iyo qoorta ayaa lagu dhejin karaa cabirka saaxiibkaaga dhogorta ah. Waxay ku habboontahay sifiican waxayna hubineysaa in eeyga uu kufiican yahay inuu xirto oo uu haysto meel ku filan oo uu ku koro. Xadhiga xabadka eeyaha ayaa ku habboon socod maalmeedka, gucleynta, tababarka, ugaarsiga, socodsiinta bannaanka iyo waxyaabo kaloo badan.
Ensure Nabadgelyo tayo sareysa】 - D-siddooyin qaro leh oo ku yaal laabta iyo dhabarka ayaa lagu xoojiyaa kordhinta. Guntinta adkeynta ee dhabarka ku dheereysa waxaa loo isticmaali karaa in lagu hareereeyo suunka kursigaaga si loo hubiyo eeygaaga. Xargaha tillaabada ah waxay xaqiijinayaan badbaadada eeygaaga markay baxayaan habeenkii. Naqshadda gaarka ah ee leh xarkaha xidhan waa suumanka mid aan sahlanayn inuu dhaco oo amaana.
Design Naqshadda jiidista ahi waxay kordhisaa raaxada】 - Nashqadda nalka jiidista ah waxay xiisadda u qaybisaa jirka eeyaha si looga hor tago inuu jiido oo u dhinto. Tani waa xalka ugufiican ee jiid eeyga. Isla mar ahaantaana, suufka jilicsan ee jilicsan ayaa ka hortagaya jiida dhaawaca wuxuuna ku siiyaa eygaaga raaxo dheeri ah iyo ilaalin. Dahaarka miskaha neefsashada ayaa ka ilaaliya eeygaaga isla markaana u oggolaada eeygaaga inuu jeclaado waxyaabaha ka soo baxa.
Life Nolosha dhaadheer har - Waxyeelada 'Petacc' waxaa laga sameeyay Oxford tayo sare leh, leh cufnaan aad u sareysa, culeyskoodu fudud yahay oo sahlan in la nadiifiyo, laga hortago in la calalilo ama la jeexjeexsado oo la siiyo nolol dheer. Haddii aad la kulanto wax dhibaatooyin ah inta aad isticmaaleyso, fadlan noo soo dir e-mayl. Waxaan bixinnaa dammaanad qaadka nolosha ah iyo lacag-celin taxaddar la'aan maalmaha 60.
HUNTER silsilad neo Loose for eeyaha, nylon, oo lagu dhejiyay neoprene, isboorti iyo waqti firaaqeedka L, brown / caramel tilmaame
Fikrad ahaan nolol maalmeedka ama waxqabadyada isboortiga
Waxyaabaha laga sameeyey nayoolo joogto ah oo neoprene jilicsan
Xajmiga ayaa xajiya xNUMX - 60 cm
Xoog iyo fududeyn nadiifinta
Xayawaanka eeyaha BPS eeyaha eeyaha, xayawaanka raba, eeyaha yaryar, dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn, buluug, SmallAd
Dhaqdhaqaaqa dareenka ee dhammaan noocyada eeyyada leh taam ah oo ku habboon duleelka.
Qalabka tayada-sareeya, xoqan-u-adkeysi leh.
Dhaqdhaqaaqa xajmiga 5 si aad u kala xulato.
Waa sahlan tahay in la isticmaalo, goobtu waa mid deg deg ah oo sahlan oo leh guji sahlan.
Midabada cagaarka ah, oo ku haboon eygaaga.
hargaha curli Vest Air-Mesh, madow, S bandhigay
Waa fududahay in la isticmaalo
Xaraashka Ey Xaraashka ah ee loogu talagalay Eyga Dog Harness ee Dolar weyn Dogs Anti Tareenka Xaragada Chest Harness No Pull Security Harness Car Dog Harness Labrador Puppy Harness Jogging Burclarproof Soft Padded Orange LAnzeige
Raadi cabir habboon: st Chest: 68-81 cm; Cabbirka saxda ah eeyaha weyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah, sida Labrador, Adhijirka Jarmalka, Dhalinta dahabka ah, Xudduudaha Bullie, Bully Pit Bull, Bulldog, Akita iwm. (Cabir inta badan eeygaaga ka hor intaadan iibsan, hubi inaad isticmaasho 2-3cm wali la sii joogayo)
【Maya Pull Design & Better Control】: Naqshadeynta anti-sawirta waxay yaraynaysaa cadaadiska qoorta ku xiran markaad lugeyneyso ama aad u socoto, yaraynta halista jiidista. Dufanka ayaa loo qaybiyaa celcelis ahaan jirka. Qalabka la iskudhin karo ee suunka ayaa bixiya xoriyadda dhaqdhaqaaqa iyo hagaajinta
【Ammaan iyo Xasilooni】: Midabada iftiinka ka ifinaya midabbo iyo xargaha waxay xaqiijinayaan aragtida iyo badbaadada xitaa xaaladaha nalka-hooseeya. Dhar jilicsan oo ka sameysan dharka Oxford, silsilad adag oo zinc aluminium ah iyo xamili, kubad culus oo suufka PP ah iyo mesh breathable oo tayo sare leh ayaa abuureysa raaxada iyo awooda lagu adkeynayo eeyga gaariga.
【Easy to wear and adjust】: Qalabka feerka oo la hagaajin karo iyo baalsa, gelinta iyo ka-qaadashada waa sahlan oo dhakhso u ah eeyaha. Xirmooyinka buuxda ee lagu hagaajin karo laabta iyo qoorta ayaa u oggolaanaya habka caadada u ah xayawaankaaga, ku habboon maalin kasta socodka, socodka, gucleynta, socodka, tababarka, iwm
Quality Tayada sare】: qanacsanaantaadu waa mudnaanta koowaad, waxaan ilaalinaa dhammaan arrimaha la xiriira tayada. Waxaan sii wadi doonnaa dhageysiga talada wanaagsan ee macaamiisheena waxaanan sii wadi doonnaa tayaynta alaabadayada. Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah inta lagu jiro isticmaalka, fadlan ha ka labalabeyn inaad noo soo dirto emayl
hawada SlowTon Hundegeschirr suunka permeable leh suxuunta double mesh latex badbaadada gaariga shuluggii safar joogto ah maalin kasta oo ciyaaraha hawlaha VierbeinerAnzeige ah
kulanka New iyo si wanaagsan la sameeyey --- latex hawada-permeable Double mesh la shuluggii safarka joogtada ah iyo badbaadada gaariga: Waa afar wax PP suunka ka latex hawada-permeable double ku xidhnaa mesh wax dibadda adag in uu u nuugo dhididka iyo dareemaan hawada permeable, haddii eey u xirtaan. suunka laastikada: Waxaa la sameeyey oo la xoqo u adkaysta, suunka nylon textured si loo ilaaliyo eyga, taas oo ah laastikada iyo hagaajin waayo gaariga.
Haboon iyo humanized design --- hawada permeable mesh latex suunka xabadka dhar la fiiriyey Velcro, size hagaajin, iyadoo ku xiran inta wadada aad furaysto suunka waa ku haboon si fiican u dhacdo in kasta oo aad gaariga. suunka kursiga waxaa ka mid ahaa muddo dheer ku filan si ay isaga u hesho kursiga danbe iyo meel.
Badbaadada iyo raaxada --- suunka ku daboolaya hareeraha jidhka iyo qoorta, taas oo noqon karta meeshii qoryaha. Gubashadu waxay adkeeyeen si aanay eeyada u wadi karin baabuurka si ay uga hortagaan eeyaha boodboodka kursiga hore, laakiin ma ayan ku dhejin.
Si fudud loo isticmaalo oo dhakhso loo xaliyo --- waxaa jira afar nambar oo ku yaal suunka si fudud loo qaabeyn karo si aad uga dhigto xayawaankaaga raaxo wanaagsan, taas oo ku haboon eeyaha yaryar, kuwa dhexdhexaadka ah ama xitaa kediska bisadaha iyo bisadaha dhexdhexaad ah. Suunka badbaadada Si fudud loogu rakibo gaariga iyo sidoo kale garabka.
Baaxadda iyo isticmaalka badan - dunta ayaa loo isticmaali karaa sida kursiga safarka ee baabuurka si looga hortago eyda in ay ka boodaan daaqada markaad wadayso. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa suunka joogtada ah, oo leh dib u noqoshada xadhig waa eey ku xiran sida dunta joogta ah.
Maqaalka horexadhig waa eey
xadhig waa eey